नेविसंघका नेताहरुलाई थर्काउँदै देउवाले भने- बढ्ता जान्ने भइहाल्नुपर्ने ? लाज छैन – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेविसंघका नेताहरुलाई थर्काउँदै देउवाले भने- बढ्ता जान्ने भइहाल्नुपर्ने ? लाज छैन
१९ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भाषण मात्र गर्दै हिँडेको भन्दै नेविसंघका नेताहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै थर्काएका छन् ।पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९६औं जन्मजयन्तीमा नेविसंघले शुक्रबार शान्तिबाटिकामा राखेको रक्तदान कार्यक्रममा देउवालाई बोलाइएको थियो । कार्यक्रममा साढे २ मिनेट सम्बोधन गरेका देउवाले नेताहरुलाई थार्काएका छन् ।
नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले अधिवेशन गर्न नसकेपछि देउवाले रुचाएका राजीव ढुंगानालाई सभापति बनाइएको छ भने भागबन्डाका आधारमा उपसभापति, महामन्त्री चयन गरिएको छ भने केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन ।कार्यक्रममा पूर्वमहामन्त्री मनोजमणि आचार्यले नेविसंघलाई पार्टी नेतृत्वले भुत्ते बनाएको तथा संगठनलाई पूर्णता नदिएको बताएका थिए, तर देउवाले उल्टै थर्काएका छन् ।
नेविसंघ, तरुण दल सबैले पूर्णता पाउने बताए । केही समस्या रहेको भन्दै उनले भने, ‘विद्यार्थीहरु मिलेको भए समस्या नै हुने थिएन नि । आफैं झगडा गर्‍यागर्‍यै छन् ।’एक समय नेविसंघको सभापति भएर आएको आफू चारपटक प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनले भने, ‘तपाईंहरु कोही हुनसक्नुहुन्छ भोलि यस्तै हिसाबले ? लाज पनि छैन ।’
उनले अघि भने, ‘गाउँमा जाऊ, स्कुलमा नेविसंघ बनाएर देखाऊ । केही नगर्ने, अनि मसँग कुरा गर्ने ?
जेठ अन्तिमबाट एसईई परीक्षा लिन कार्यदलको सुझाव
यस्तो छ कक्षा ११–१२ को नतिजा र भर्नाको तालिका
प्रचण्डलाई फेसबुकमा गालीगलौज गरेको आरोपमा रेडियो नेपालका बोर्ड सदस्य पाठक पक्राउ